Nootropics PRL-8-53: Hagaajinta Xusuusta iyo Kartida Barashada?
Nootropics PRL-8-53: Runtii ma hagaajineysaa Xusuusta iyo Kartida Barashada?
Buun buuninta PRL-8-53 sida daroogada nafsaaniga ah loo raad raaco bilowgii 1970s. Nikolaus Hansl, oo ah borofisar ka tirsan jaamacadda Creighton, ayaa si kadis ah u helay nootropic-ka isagoo ka shaqeynaya esters aminoethyl meta benzoic acid.
Tan iyo markii la aasaasay, kaabiskani wuxuu soo maray hal daraasad oo qadiim ah iyo tijaabo aadanaha. Cilmi-baarista bukaan-eegtada ayaa ahayd caddaynta ugu dambeysa ee ah in PRL-8-53 ee wax-barashada ay hagaajiso xusuusta muddada-gaaban iyo hadalka hadalka.
PRL-8-53 ma helin ogolaanshaha FDA, laakiin waa kaabis aan la qorsheynin oo Mareykanka ah. Waxaad si xor ah uga dhigi kartaa iibsiga PRL-8-53 daawo daroogo ah oo lagaa iibsado.
Waa maxay PRL-8-53?
PRL-8-53 waa nooc ka mid ah benzoic acid iyo benzylamine. Cilmi ahaan, waxaa loo yaqaanaa 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate.
Laga soo bilaabo dhammaadkii 1970-yadii, PRL-8-53 waxay ahayd dhammaan xanaaqa sida daroogada nafsiga ah ee loogu talagalay kor u qaadista howlaha maskaxda. Uguyaraan, waxaa jira tijaabo aadanaha oo guuleysata oo taageerta waxqabadkeeda. Ka sokow, PRL-8-53 dib-u-eegis ku saabsan Reddit waxay dib u soo celinaysaa waxtarka dheeriintan hagaajinta xusuusta iyo barashada.
Professor Hansl asal ahaan wuu ogaaday taas PRL-8-53 nootropic wuxuu kobciyaa xusuusta muddada-gaaban iyo xusuusta hadalka. Si kastaba ha noqotee, daroogadu waxay sidoo kale ka hortageysaa niyad-jabka, walbahaarka, walwalka, iyo daalka.
Daraasado cilmi-baaris oo aan ku filnayn oo ku saabsan PRL-8-53, habka saxda ah ee ficilku waa qarsoodi. Si kastaba ha noqotee, saynisyahannadu waxay u maleynayaan in daroogadu ay u kordhiso hawlaha maskaxda saddex siyaabood.
Nooca PRL-8-53 dhaqaajiyaa dheecaanka acetylcholine, taas oo ah madaxa neurotransmitter, mas'uul ka ah shaqada xusuusta iyo barashada.
Daawadan cilmi-nafsiga waxay sidoo kale ku shaqeysaa nidaamka dopaminergic iyadoo wax laga beddelayo heerarka dopamine ee caafimaadka qaba. Maxaa intaa ka badan, qaadashada Niyad jab PRL-8-53 daroogada ayaa hor istaagi doonta soosaarka xad dhaafka ah ee serotonin. Saameyntani waxay kor u qaadeysaa heerarka walaaca si loo maareeyo walwalka, isbedelka niyadda, iyo hurdo la'aan.
Waxay kordhisaa Kartida Waxbarida
Budada PRL-8-53 waxay cadeyneysaa hagaajinta garashada iyo awooda barashada. Dheeraadku wuxuu kiciyaa xusuusta macluumaadka, ereyada, iyo fikradaha kala duwan. Sidaa darteed, waxay noqotay daroogo daraasad buunbuunin ah oo ka dhex jirta ardayda doonaya inay ku maraan imtixaan adag.
PRL-8-53 ee daraasadda ayaa sidoo kale wanaajin karta diiradda, gaar ahaan marka la isku dayayo in la fahmo fikradaha cusub. Qaar ka mid ah cilmi-nafsi-yaqaannada ayaa sheeganaya in qaadashada daroogadan caqli-gal ah ay kugu ilaalinayso wadada, waxaadna yareyn doontaa halgan inta aad sharraxayso qalabka cusub. Faa'iidooyinkaan PRL-8-53 waxaa laga yaabaa inay u tahay waaberi cusub dadka maskaxda wax ka garanaya ee ku mashquulsan qaar ka mid ah imtixaannada fiisikiska ee jimicsiga adag ama baaritaanka afka ee aan loo baahnayn.
Mid ka mid ah saameynta muhiimka ah PRL-8-53 waxaa ka mid ah kor u qaadista xusuusta. Nootropic wuxuu dhaqaajiyaa acetylcholine iyo nidaamka dopaminergic, kuwaas oo muhiim u ah garashada.
In tijaabada bukaan socodka ee ku lug leh 47 maadooyinka caafimaadka, borofisar Hansl wuxuu xusay in kuwa qaatay PRL-8-53 ay ku fiicnaadeen tijaabada xusuusta marka loo eego kaqeybgalayaasha placebo. Ka sokow, xusuustani waxay socon kartaa ugu yaraan toddobaad.
Kahor tijaabinta maadooyinka aadanaha, Hansl wuxuu ogaaday in PRL-8-53 uu faa iido u leeyahay saamaynta xusuusta jiirka. Kaabistu waxay ka dhigaysaa tusaale murtiyeed si loo xusuusto oo loola xiriiro jawaab celinta xaalad walaac leh.
Waxay wanaajisaa dhiirigelinta waxayna yaraysaa daalka
Daawada niyadjabka ee PRL-8-53 waxay soo bandhigeysaa guryaha dopaminergic. Xarunta waxay kordhisaa dhaqdhaqaaqa dopamine, kiimiko maskaxeed oo saameysa dhiirigelinta, niyadda oo sareysa, iyo daal yaraanta. Sidaa darteed, waxay dhiirrigelisaa caafimaadka nafsaaniga ah, iyadoo ay suuragal tahay in laga hortago xanuunnada maskaxda sida ADHD iyo schizophrenia.
In kasta oo saamaynta togan ee PRL-8-53 ay tahay, waa inaadan u adeegsan nootropic ahaan qayb hoosaad daawada laguu qoray. Xaruntaan looguma talagalin ujeedo ama daaweyn cuduro.
Sidee loo qaataa PRL-8-53?
The caadiga ah Qiyaasta PRL-8-53 waa qiyaastii 5mg maalintii, oo loo qaato kaabis ahaan afka ah. In kasta oo ay jiraan cilmi-baaris kooban oo lagu dejinayo qiyaasta ugu badbaado badan, tijaabadii ugu horreysay ee aadanaha ayaa isticmaashay 5mg. Baadhitaan ku socda qaar ka mid ah dib-u-eegista PRL-8-53 waxay xaqiijineysaa in qaar ka mid ah dadka aadka u jecel ay qaataan inta ugu badan 10mg ilaa 20mg ee dheeri ah.
Haddii aad maamusho kaabista sameynta xusuusta muddada-gaaban, sida marka aad imtixaanka qaadaneyso, hubi inaad isticmaasho laba saacadood kahor jimicsiga dhabta ah.
Nooca 'PRL-8-53 nootropic' waxaa lagu heli karaa budo, kiniin, iyo qaabab dareere ah. Waxaad dooran kartaa inaad liqdo kaniiniga ama aad ku darto cabitaankaaga; hadba kii kugu habboon. In kasta oo aad dooran karto maamul laba-luuqadle ah, habkani wuxuu ku suuxinayaa carrabkaaga. Isticmaalayaasha badankood waxay doorbidayaan inay afka ku qaataan PRL-8-53.
Xilligan, ma jiraan wax ku habboon talo soo jeedin PRL-8-53 ah. Is-dhexgalka suurtagalka ah ee xaruntan iyo daroogooyinka kale ee nafsiga ah lama yaqaan. Ka sokow, PRL-8-53 waxay leedahay awood sare, sidaa darteed, waa wax aan loo baahnayn in lagu daro nootropics kale oo xusuusta-kobciya.
Ma soo jeedinayno ama kuguma talineyno midkoodna Xirmooyinka PRL-8-53. Uguyaraan, way fiicnaan laheyd haddii aadan ku dhiiranin daroogooyinka caqliga badan ee leh saameyn isku mid ah. In kasta oo digniintani adag tahay, haddana dadka isticmaala qaarkood ee ka mid ah bulshada cilmu-nafsiga waxay qirayaan in isku-darka budada PRL-8-53 ee Alpha-GPC, piracetam, IDRA-21, iyo theanine ay iyaga siiso waxtarka daaweynta ugu badan.
Ma jiraan waxyeellooyin PRL-8-53 ah?
Ilaa hadda, ma jiraan wax saameyn ah oo la duubay ee PRL-8-53. Kheyraadka kaliya ee la heli karo waxay dib ugu laabanayaan 1970s inta lagu gudajiray tijaabooyinka bukaan socod eegtada iyo tan hore ee nootropic. Daraasadda aadanaha, kaqeybgalayaashu ma aysan soo bandhigin calaamado xun oo ku saabsan qiyaasta 5mg maalintii.
In kasta oo aysan jirin waxyeellooyin daaweyn ah oo loo yaqaan 'PRL-8-53' oo ku jira diiwaanka, hubi inaad ilaaliso qiyaaso hooseeya. Sida laga soo xigtay daraasadda jiirka, xaddi badan oo dheeri ah ayaa wax u dhimaya dhaqdhaqaaqa.
Waxaa jira khibrado badan oo adeegsadeyaal ah oo ku saabsan Reddit iyo dukaanka Amazon ee ku saabsan saameynta Walaaca PRL-8-53 nootropic.
Fiiri qaar ka mid ah dib u eegista PRL-8-53;
Barashada iyo Xusuusta horumarinta
Chrico031 wuxuu leeyahay;
Waxaan si aad ah u isticmaalaa PRL-8-53 markasta oo aan leeyahay muxaadarooyin aan xafido. Waxay wax weyn ka beddelaysaa sida ugu dhakhsaha badan ee aan u xafidi karo maaddada. ”
Inmy325xi wuxuu leeyahay;
“Waxaan dareemay ku xirnaansho afka ah ee PRL naftayda. Oo ay ku lammaan yihiin kafeyn, waa qalab waxbarasho oo aad u wanaagsan. ”
Baliflipper wuxuu leeyahay;
“Waxaan kubilaabmay qaadasho yar waxaanan ka shaqeeyay sidii aan uheli lahaa tiro aad u tiro badan. Xaqiiqdii waxaan dareemayaa in 10mg uu yahay qiyaas maalinle ah great Si kastaba ha noqotee, waxaan go'aansaday inaan isku dayo 20mg maalinta jimcaha si aan u tijaabiyo Neuroscience oo aan aad ula yaabay xoojinta xusuusta… Waxaan dareemay in qiyaasaha waaweyn ay xaqiiqdii gacan ka geysteen dib u soo celinta ayna caawinaad weyn u ahayd baaritaanada . ”
Lifehole wuxuu yidhi;
"Waxaan ku qaataa subaxdii markii aan ka soo kaco (11-ka subaxnimo) Noopept, L-theanine, bupropion, vortioxetine, iyo tianeptine… Runtii macquul maahan in la kala garto waxa sameeya daroogada noocan oo kale ah ee culus marka la eego xaafadaha com"
Hadda waxaan sameeyaa IDRA-21 iyo PRL-8-53 maalin kasta oo kale. Waan jeclahay isugeynta, waxayna ka dhigeysaa xifdinta iyo fahamka fikradaha cusub mid aad u fudud. ”
“Sida ugu yar ee dadka luqadaha ku hadla, waxay u dhadhamisaa si aad u xun. Si kastaba ha noqotee, uma xuma sida Noopept… sidoo kale wuxuu carrabkaaga ka dhigi doonaa mid quruxsan oo kabuubiya dhawrka jeer ee ugu horreeya… Faa'iidooyinka ayaa hubaal ka dhadhan fiican dhadhanka. ”
Omniavocado wuxuu leeyahay;
Waxaan la kulmay waxyar oo ka sii xun xusuusta ka dib markii saameyntu ay hoos u dhacday xitaa iyadoo qiyaasaha yar yar la qaatay. Qiyaasta ugu dambeysay ka dib, waxaan yeeshay dareen aan la qeexin karin, xoogaa raaxo la'aan ah. ”
Isticmaalaha aan la aqoon wuxuu leeyahay;
"Qiyaasta ka sarreysa 30mg hadal ahaan iyo 15mg sublinally, waxaan helay madax xanuun iyo saameyn yaab leh oo ku saabsan aragtidayda."
Budada PRL-8-53 waa nootropic rajo leh oo wali aan laga baaraandegin cilmiga sayniska. Caddaynta kaliya ee la taaban karo ee wax ku oolnimadeedu waa shan iyo toban sano. Si kastaba ha noqotee, neurohackers xamaasad leh ayaa bangiga u ah iyada oo ah xoojiye xusuus leh oo leh saameyn yar oo PRL-8-53 ah.
Dheeraadku wuxuu ku habboon yahay xusuusta muddada-gaaban. Macluumaadka laga soo ururiyey isticmaaleyaasha khibrada leh iyo daraasadaha cilmi baarista ee la heli karo ayaa taas xaqiijinaya Walaaca PRL-8-53 daroogadu waxay hagaajin doontaa xusuusta illaa 200%.
Isdhexgalka nootropic-kan iyo daawooyinka kale wali waa qarsoodi. Sidaa darteed, ammaankiisa iyo dulqaadkiisa lama yaqaan. Marka, isku dayga tijaabada PRL-8-53 sidoo kale ikhtiyaar ma ahan. La tasho dhakhtarkaaga ka hor intaadan qaadan daawada kale ee loo qoro PRL-8-53.
Waxaad samayn kartaa PRL-8-53 inaad ku iibsato budo ama qaab kiniin ahaan ah a kaalmo-dhaqaaleedka "nootropic supplement".
Hansl, NR, & Mead, BT (1978). PRL-8-53: Barashada la xoojiyay iyo ku haynta bini'aadamka taas oo ay ugu wacan tahay qadar yar oo afka ah oo ah wakiilka cusub ee cilmi nafsiga. Psychopharmacology (Berl).
Hansl, NR (1974). Buug-yaraha 'spasmolytic' iyo wakiilka firfircoon ee CNS: 3- (2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride.
McGaugh, JL, & Petrinovich, LF (1965). Saamaynta daroogadu ku leedahay barashada iyo xusuusta. Dib-u-eegista Caalamiga ee Neurobiology.
Kornetsky, C., Williams, JE, & Bird, M. (1990). Saamaynta feejignaanta iyo dhiirigelinta ee daroogada nafsiga ah. NIDA cilmi baaris.
Giurgea, C. (1972). Farmashiyada waxqabadka isku dhafan ee maskaxda. Isku day fikradda nootropic ee psychopharmacology. Farmashiga dhabta ah (Paris).
Hindmarch, I. (1980). Shaqada Psychomotor iyo daawooyinka nafsiga ah. Joornaalka Ingiriiska ee Daawada Daawada Daaweynta.
RAW PRL-8-53 MAWDUUC (51352-87-5)
2.Waa maxay PRL-8-53?
4. Faa'iidooyinka PRL-8-53
5.Sidee loo qaataa PRL-8-53?
7. Ma jiraan waxyeellooyin PRL-8-53 ah?
8. Khibradaha Isticmaalayaasha